Umaki: ukukhomba okuncane | Martech Zone
Umaki: ukukhomba okuncane
NgoMsombuluko, Mashi 2, 2015 Douglas Karr
Ngaphandle kwezifanekiso ze-imeyili eziphendulayo, ubuchwepheshe obusemuva kwe-imeyili abukashintshi kakhulu kule minyaka eyishumi edlule. Kodwa-ke, njengenye yezimbuyiselo eziqine kakhulu ekutshalweni kwezimakethe, abathengisi babona ukubuya okukhulu lapho basebenzisa ubuchwepheshe obugcwele ngokuhambisana nemiyalezo abasabalalisa. Nakhu ukuthuthuka kwe-14 kwezobuchwepheshe Okuthinta ukumakethwa kwe-imeyili Ukwenza ngezifiso kwesikhathi sangempela ngokusekelwe kwedatha yesiteshi esiwela. Imithombo emikhulu yedatha izondla okuqukethwe okubikezelayo nokuqukethwe ku-imeyili. Imiyalezo ebumbene
Noma mhlawumbe namanje! Lolu uhlu oluqinile lwezindawo eziyi-10 zokugxila abathengisi abadinga ukucabanga ngazo. Udinga ukwazi ukuthi ungabela kuphi inqwaba yesabelomali sakho sokumaketha, ngokususelwa kumaqhinga amakhasimende akho namathemba ahlanganyela nawo kaningi. Kungakho abeluleki beW Wheelhouse bezamile ukwenza le infographic ibanzi ngangokunokwenzeka, babhekane nezinkinga ezivela ku-imeyili Marketing, ukuhola ukuguqulwa, kube amapulatifomu we-automation. Izibikezelo Ezingu-10 Zokumaketha zango-2015